Zinedine Zidane oo muujiyay hal arrin uu aad uga walaacsan yahay xilligan – Gool FM
Zinedine Zidane oo muujiyay hal arrin uu aad uga walaacsan yahay xilligan
(Madrid) 06 Okt 2019. Macalinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa muujiyay waxa uu aad uga walaacsan yahay xilligan ee ah in ciyaartoyda kooxdiisa aysan heli doonin wax nasiino ah maalmaha soo socda.
Inta ugu badan ciyaartoyda kooxda Real Madrid ayaa waxay u safri doonaan inay kala qeyb galaan xulalkooda kulamada adag ay ciyaari doonaan, inta lagu gudi jiro fasaxa kulamada caalamiga ah.
Zinedine Zidane ayaa ku sharxay qaab qosol leh in loo baahan yahay in la aqbalo kulamada caalamiga ah, balse wuxuu dhinaca kale tilmaamay inay saameyn ku yeelato xaalada jir ahaaneed ee kooxda marka loo eego aragtidiisa.
Zidane ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id kaddib guushii 4-2 aheyd ay shalay kaga gaareen Granada horyaalka La Liga wuxuuna yiri:
“Waxaan doonayaa in kooxdeyda ay sameyso wax intaas ka sii badan, laakiin isla waqtigaas, aad ayaan ugu faraxsanahay waxa ay bixinayaan ciyaartoydu, sababtoo ah maahan wax sahlan xilligan la joogo”.
“Waad ogtahay inaysan jirin kulamo fudud, waa inaad ciyaarto daqiiqada ugu horeysa ilaa iyo tan ugu dambeysa, Granada waxay heshay fursado, waxayna naftooda ku muujiyeen horteena”.
“Laakiin isla waqtigaas waa inaan maanta faraxsanaanaa, aniga ahaan aad ayaan u faraxsanahay sababtoo ah waan soo fiicnaaneynaa, waxaana hogaamineynaa horyaalka Spain, taasina waa waxaan dooneyno, laakiin horyaalka waa mid wali aad u fog, waa inaan si adag u shaqeynaa, sida aan xilli kasta sameyno”.
“Waxaan kaliya ka walwal qabaa hadda, sababtoo ah in badan oo ciyaartoydeyda ah ayaa u baxaya kulamada caalamiga ah, waa inaad aqbashaa arrintan, ciyaartoyda kooxdeyda ma heli doonaan wax nasiino ah, taas waxaan u arkaa inay tahay wax xun”.